Magaalada Harar oo biyo la’aan kadhacday. | ogaden24
Magaalada Harar oo biyo la’aan kadhacday.
Oct 12, 2018 - Aragtiyood
Magaalada Qadiimiga ah ee Harar oo kamida magaloyinka ugu waawayn wadanka Ogadenia, ayaa waxaa kataagan biyo la’aan baahsan oo saamaysay inta badan dadka kudhaqan magaalada.
Qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Harar ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay wadeen cabasho xoogan oo ay kamuujinayaan biyo la’aanta soo wajahday, balse majirto cid ilaa iyo Hada dhag Jalaq usiisay cabashada iyo Qayla dhaanta laxidhiidha biyo la’aanta magaalada kajirta.
Bulshada Heraradi ah ee kudhaqan magaalada ayaa Labadii maalmood ee u dambaysay waxay kuwareegayeen xafiisyada iyo xarumaha kale ee dawlada, si wax looga Qabto biyo la’aanta magalada balse mamulka Heraradi ayaan wax Jawaab ah kabixin wali cabashada shacabka.
Maamulka cusub ee Abiye Axmed uu Hogaaminayo ayaan waxba kabadalin dhibaatooyinkii haystay shacabka kudhaqan wadanka Ogadenia oo magaalada Harar, ay Qayb katahay balse Nidaamka Kooxda EPRDF uu si sharcidara ah uga reebay.